Halkee laga iibsan karaa mobilada Shiinaha, goobo lagu kalsoon yahay - Sebtember 2021 | Androidsis
Jose Alfocea | | Shiinaha Shiinaha, Mobiles
Tirada iyo noocyada kala duwan ee taleefannada casriga ah ee aan hadda ka heli karno suuqa waa kuwo aad u tiro badan, sidaa darteedna markii aan dooneyno ama aan u baahan nahay inaan badalno terminaalkeenna, waxaa caadi ah inaan helno jahwareer dhab ah maadaama qiimuhu aad u kala duwan yahay, hase yeeshe, faa'iidooyinka oo tayo sare iyo ka hooseeyaba ay si isa soo taraysa isu dhexgalayaan, iyo khadkaas kala soocaya hooseeya, dhexdhexaad, sare ama heer cayiman, ayaa sii kordheysa.
Sababtaas awgeed, maanta Androidsis kuma siin doonno talo ku saabsan sida loo iibsado taleefannada Shiinaha ugu fiican ama ku saabsan kuwa casriga ah ee ugu fiican, ama kuwa ugu jaban ama kuwa bixiya qiime ka fiican lacagta. Maanta wax macno ah kuma lahan nooca taleefanka gacanta ee aad u baahan tahay, ama midka aad rabto iyo midka aad ku dambaynayso inaad iibsato, maxaa yeelay maanta waxa aan kuu sheegayno ayaa ah halka laga iibsado moobiillada Shiinaha ugu fiican Ka imanaya suuqa.
1 Khuraafaadka bixinta
2 Ka soo iibso Spain ama ka iibso Shiinaha?
3 Dukaamada Spain oo leh dammaanad qaad Yurub ah
4 Si toos ah uga iibso Shiinaha
5 Si toos ah ugu iibso taleefannada gacanta ee ugu wanaagsan Shiinaha bogagga shabakadaha soo saarayaasha
Markii aan ka hadlayno taleefannada gacanta ee Shiinaha, waxaa jira dad badan oo weli si fudud uga fikiraya nuqullada, been-abuurka iyo aaladaha tayada shakiga leh, si kastaba ha noqotee, suuqani wax badan buu is beddelay kiisaska badankoodna hadda xaaladdu sidaa ma aha. Aynu daqiiqad ka fikirno noocyada sida Meizu, Huawei, Vivo, Oppo ama Xiaomi. Dhammaantood waa shirkado in kasta oo aan weli laga helin dalal badan, ay yihiin ay ku qanacsan yihiin oo ay doonayaan tiro sii kordheysa oo macaamiisha ah. Sababta waa sahlan tahay: waxay barteen sameynta aalado tayo leh laakiin wax walba ka sarreeya, awooday in la isku daro waxqabadka wanaagsan iyo qiimaha aadka u faa'iidada badan marka loo eego kuwa ay bixiyaan shirkadaha kale ee warbaahinta sida Samsung ama Apple.
Dhinaca kale, ka hadalka "nuqulada" waa ganacsi khiyaano leh. Way cadahay in waagii hore, iyo ilaa hada, noocyo badan lagu eedeeyay inay koobiyeen kuwa kale (mid ka mid ah kiisaskii ugu dambeeyay uguna caansan wuxuu ahaa OnePlus 5, oo ay yiraahdaan wuxuu u egyahay "macquul macquul ah" iPhone 7) Lagu daro Apple) hase yeeshe, ma qaab afargeel baa nuqul ah? Isku-dubbaridka astaamuhu ma koobi baa? Dhinacyada wareegsan miyay nuqul yihiin? Hagaag, halkaas ayaan kaga tagayaa.
Ka soo iibso Spain ama ka iibso Shiinaha?
Markaad go'aansaneysid halka laga iibsanayo mobilada Shiinaha ugu fiican, su'aasha ugu weyn ayaa ah in lagu sameeyo dukaamada Spain ama dukaamada internetka ee Shiinaha Asal ahaan, farqiga u dhexeeya hal ikhtiyaar ama kan kale wuxuu saameeyaa cabirka qiimaha iyo dammaanadda, si kastaba ha noqotee, iyagu maahan dhinacyada kaliya ee ay tahay inaan tixgelinno:
Dukaamada Shiinaha ee internetka waxaan ka heli doonnaa qiimaha hoose Ka imanaya suuqa.
Dhinaca kale, markaan wax ka iibsaneyno dukaamada Shiinaha waxaan halista ugu jirnaa in alaabteena lagu xirayo kastamka, taas oo macnaheedu noqon doono lacag bixin oo noqon karta ilaa 40 euro.
Markaad wax ka iibsaneyso Spain ama wadan kasta oo EU ah waxaa na daboolaya sharciga xuquuqda macaamiisha. Waxa ugu muhiimsani waa inaan haysanno ugu yaraan muddo 14 maalmood ah si aan ugu soo celino badeecadda bilaash, iyo ugu yaraan laba sano oo dammaanad ah dhibaatooyinka ka dhalan kara cilladaha soo saarista.
Oo si toos ah ula xidhiidha kor ku xusan waa adeegga iibka kadib. Ma qiyaasi kartaa inaad la xiriirto iibiye Shiineys ah oo ku yaal meel kumanaan iyo kumanaan kiilomitir u jirta sideed bilood gudahood?
Markii aan wax ka iibsaneyno Shiinaha, caadiyan waa inaan sugnaa inta u dhexeysa soddon iyo xitaa lixdan maalmood si aan ugu soo qaadanno alaabta guriga; Haddii aan ka iibsanno Spain, waxaan heli karnaa moobilka cusub maalinta xigta.
Markaad qiimeyso kala duwanaanshahan, adiga kaliya ayaa go'aanka gaara laakiin si kastaba ha noqotee, waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee aad ka iibsan karto taleefannada Shiinaha ugu fiican, Spain iyo dibaddaba.
Dukaamada Spain oo leh dammaanad qaad Yurub ah
Sidii aan ku sheegnay bilowgii, mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee iibsiga mobilada Shiinaha ugu fiican dukaamada internetka ee Isbaanishka (ama ku yaal waddan kasta oo ka mid ah qaab dhismeedka Midowga Yurub), waa inaan helno caymis damaanad ugu yaraan muddo laba sano ah, sida ay dejiyeen sharciyada macaamiisha bulshada. Intaas waxaa sii dheer, waxaan ku sameyn karnaa soo celinta sheyga lacag la'aan iyo annaga oo aan sharrax ka bixin afar iyo tobanka maalmood ee ugu horreysa ee wax iibsiga (ama muddada dheer ee uu iibiyay).
Soo laabasho, siciradu badanaa sidaas uma yara Sida loo iibsado websaydhka Shiinaha, si kastaba ha noqotee, waxaan u maleyneynaa inaan mar hore ka bilownay qiimaha soo saaraha aadka u faa'iidada badan, waxaan haysan doonaa dammaanad qaadka aan soo sheegnay iyo sidoo kale, Waxaan heli doonaa moobilkeena cusub waqti hore.
Qaar ka mid ah dukaamada waaweyn ee Isbaanishka oo aad ka iibsan karto moobiillada Shiinaha ugu fiican waa kuwan soo socda:
Amazon. Shaki la'aan, shirkadda iibka internetka ayaa ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee laga iibsado moobilkeena cusub. Siciradoodu badanaa waa kuwa ugu faa'iidada badan suuqa (had iyo jeer had iyo jeer), waxaad heli doontaa dammaanad Amazon ah sidoo kale, haddii aad tahay ra'iisul wasaare, waxaad ku heli kartaa guriga bilaash maalinta xigta. Gudaha Amazon waxaad ka heli kartaa noocyada ugu waaweyn ee moobiillada Shiinaha ugu fiican, waana taas sababta ay u tahay dukaanka aan inta badan kugula talinno adiga munaasabadaha badankood.
Fnac waa mid kale oo ka mid ah dukaamada meesha waad heli kartaa qaar ka mid ah telefoonnada gacanta ee ugu fiican Shiinaha. Sida Amazon oo kale, haddii aad xubin ka tahay silsiladdan Faransiiska waxaad yeelan doontaa rar bilaash ah. Taas bedelkeeda, qiimayaasheedu badanaa maahan ikhtiyaarka ugu fiican suuqa, mana bixiso noocyo badan oo taleefannada gacanta ah sida Amazon. Mid ka mid ah wararkeedii ugu dambeeyay ayaa ah inay noqotay shirkad rasmi ah oo loo qaybiyo shirkadda Xiaomi, sidaa darteed haddii aad ka rabto mobiil sumaddan, waa meel wanaagsan oo la fiiriyo.
War Saxaafadeed Waa mid kale oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan elektaroniga, kumbuyuutarrada iyo iibiyeyaasha taleefanka. Sidoo kale Halkan waxaad awoodi doontaa inaad ku hesho noocyo kala duwan oo deeqsi ah oo telefoonnada gacanta ah oo qiimo jaban leh.
Waxyaabaha PC. In kasta oo magaceeda, iibiyahan isbaanishka ah fadhigeedu yahay Alhama (Murcia) waa mid ka mid ah dukaamada internetka ee ugu caansan dalkeenna, waxayna sidoo kale bixisaa qaar ka mid ah taleefannada gacanta ee Shiinaha oo aad guriga ku haysato maalinta ku xigta.
Awoodda Planet Online. Weli kama guurinno Murcia maxaa yeelay magaalooyinka Alhama iyo Totana waxaa ku yaal mid ka mid ah kuwa Shiinaha ee iibiya taleefannada gacanta. Waxay u adeegaan Isbaanishka oo dhan, waxay leeyihiin qiimo aad u faa'iido badan, dhoofinta xawliga ah, adeeggooda iibka kadib waa mid cajiib ah waxayna bixiyaan mid ka mid ah noocyada ugu waaweyn moobiillada Shiinaha iyo dhammaan noocyada qalabka. Waxaan ku hadlaa khibrad. Waxaad toos uga heli kartaa Halkan.
Nolosha Geek Waxay ka shaqeysaa Spain sidaa darteed waxaad heli doontaa dammaanad maxalli ah iyo adeegga iibka kadib. Intaa waxaa dheer, in dukaankaaga internetka Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad ka doorato shixnadaha Shiinaha (ka jaban) ama Isbaanishka 48 saac gudahood; Xitaa waad keydin kartaa badeecooyinka laguu soo diri doono isla marka ay diyaar noqdaan.
Si toos ah uga iibso Shiinaha
Iibsashada taleefannada gacanta ee ugu wanaagsan Shiinaha si toos ah shabakadaha Shiinaha waxay leedahay faa iidooyin aasaasi ah oo sharraxaya guusheeda: xaaladaha badankood, ku soo bandhig qiimaha ugu fiican suuqa. Si kastaba ha noqotee, cilladaha aan soo sheegnay bilowgii waa muhiimad gaar ah oo ay tahay inaan si aad ah uga feejignaano. Sidaa darteed, waxaan kugu martiqaadayaa inaad mar labaad geliso cutubyo oo aad si taxaddar leh dib ugu eegto.
Taasi waxay tiri, qaar ka mid ah dukaamada ugu caansan Shiinaha ee aad ka iibsan karto taleefannada Shiinaha ugu fiican qiimaha ugu fiican waa:
Aliexpress Waxaa loo yaqaan "Shiinaha Shiinaha". Tan dhexdeeda dukaanka internetka waxaad ka heli doontaa ficil ahaanba taleefan gacmeed kasta (iyo wax kasta oo aad qiyaasi karto) qiimo aad u qurux badan. Intaa waxaa dheer, marka la fiiriyo baaxadooda, waxay aadeen dadaalo badan si ay u siiyaan amniga iibsadayaasha, in kasta oo ay sidoo kale run tahay in isticmaaleyaal badani aysan la wadaagi doonin fikraddan. Laakiin ma doonayo inaad ka fikirto inaan isku dayayo inaan aflagaadeeyo dukaamadaan: shaqsi ahaan, ilaa seddex jeer ma aanan helin sheygii aan iibsaday (oo ay ku jiraan routerka Xiaomi) iyo sedexda jeerba lacagteyda waa la soo celiyey iyada oo aan sharraxaad dheeri ah laga bixin.
Iftiinka Sanduuqa Waa mid kale oo ka mid ah dukaamada Shiinaha ee ugu caansan Shiinaha; maraakiibta ku dhowaad waddan kasta, oo ay ku jiraan Spain, iyo buuggaaga runtii way ballaadhan tahay.
Heshiiska Xtreme waa dukaanka internetka ee Shiinaha oo aad ugu eg kii hore, oo wata mobiillo iyo qalab kala duwan oo aad u qiimo jaban.
Iibsade Kasta, ikhtiyaar kale oo loogu talagalay iibso mobiilkaaga cusub khadka tooska ah qiimaha ugu fiican
Igogo Waa a bogga isbaanishka iyo taageero wanaagsan oo iibka kadib ah oo alaabooyin u qaybisa dalal aad u tiro badan, oo ay ku jirto Spain.
Bang wanaagsan, hal dukaanka kuwaas oo sida caadiga ah soo bandhiga dalabyo aan caadi aheyn, qaar badan oo aan halkan ka shaacinay. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee lagu iibsado taleefannada gacanta ee ugu wanaagsan Shiinaha haddii aad go'aansato inaad ku sameyso dibadda. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay bakhaarro dhowr ah oo ku yaal Yurub sidaa darteed, haddii ay ku hayaan keyd, waxaad kuheli kartaa moobilladaada cusub gurigaaga si ka dhakhso badan sidii la filayay.
Si toos ah ugu iibso taleefannada gacanta ee ugu wanaagsan Shiinaha bogagga shabakadaha soo saarayaasha
Tani waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu ammaansan ee aan haysanno si kastaba ha noqotee, sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu adag tan iyo tan weli wax yar oo soosaarayaasha Shiinaha ah ayaa si toos ah dibadda uga iibiya boosteejooyinkooda, iyo kuwa sameeya, waxay ku sugan yihiin dalal aad u kooban. Iyada oo ay taasi jirto, waa ikhtiyaar wanaagsan, gaar ahaan helitaanka dallacsiinta suurtagalka ah ama haddii ay u baahan tahay taageero farsamo.
Waqtigan xaadirka ah, qaar ka mid ah soo saarayaasha Shiinaha ee horeyba u lahaa adeegan waa kuwan soo socda:
Huawei. Soo saaraha ugu weyn Shiinaha ayaa leh dukaanka internetka ee yurubiyanka halkaas oo aan ka iibsan karno inta badan badeecadooda. Intaas waxaa sii dheer, waxaad awoodi doontaa inaad la xiriirto adeegga iibka kadib iyo xitaa inaad ku soo celiso shuruudaha iyo shuruudaha la dejiyay.
Sidoo kale Meizu samee shixnado ficil ahaan qof walba, inkasta oo kaydkoodu uusan had iyo jeer ahayn kan ugu fiican.
Mid kale oo ka mid ah soo saarayaasha ugu waaweyn Shiinaha, Oppo, ayaa leh dukaanka internetka kuwaas oo ay u kala rarto dalal kala duwan, oo ay ku jiraan Argentina, Colombia, Peru, Bolivia iyo waliba Spain.
Waxaad sidoo kale iibsan kartaa boosteejooyinka badankood ZTE in uu dukaanka internetka gudaha Spain.
Iyadoo la tixgelinayo Xiaomi, mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan ee soo saarayaasha Shiinaha, xilligan oo keliya samee shixnado ilaa Faransiiska, Jarmalka, Boqortooyada Ingiriiska iyo Mareykanka. Sababta ugu weyn ee xaddidan ayaa ah dhibaatooyinka rukhsadda ee aad kala kulmi karto gobollada kale.
Ulefone, Shirkad shiineys ah oo ku taagan taleefannada gacanta oo leh waxqabad aad u wanaagsan iyo qiimayaal si layaab leh u hooseeya, ayaa sidoo kale leh bogga isbaanishka (iyo Ingiriis) oo ay uga adeegto dalal kala duwan, oo ay ku jirto Spain.
Hadda oo aad ogtahay faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada ugu weyn marka ay timaaddo inaad si toos ah uga iibsato moobiillada Shiinaha ugu fiican dukaamada internetka ee Shiinaha ama Isbaanishka, go'aanka adiga ayaa iska leh oo keliya: Miyaad doorbideysaa dammaanad iyo xawaare gaarsiin mise waxaad jeceshahay qiimo ka faa'iido badan oo ma awoodaa inaad isku hubiso dulqaad?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xagee laga iibsadaa mobilada Shiinaha
Haye, waxaan si toos ah uga iibsaday Blackview BV 8000 (6Gb RAM, mobile weyn) Isbaanishka http://www.movileschinosespana.com, ikhtiyaar wanaagsan sidoo kale liiskaaga, maadaama ay yihiin Blackview iyo Xiaomi Agents. Salaan
Jawaab Javier Mesa
Khibradeyda Powerplanetonline, bilo ka hor waxaan iibsaday xiaomo Mi A1, waxayna qaateen in kabadan koontada, waa inaan cusbooneysiiyaa dhamaan waraaqaha maxaa yeelay rarkeygu ma uusan muuqan, iyo powerplanet ima aysan siinin lambar raad raaca, goor dambe ayey timid. laakiin waxay timid, maalintii 5/10 / 2018, waxaan weydiisanayaa kiniin, maalinta 8 waxay la xiriiraan maraakiibta, maalinta 9 ee dabagalka waxay u muuqataa dhacdo, maalinta 10 waxay i siinayaan sanduuq madhan, shirkadda gaadiidka ayaa leh waxay i siinayaan maxay powerplanet dirtaa, hadday tahay sanduuq madhan ... Hagaag, sanduuq madhan… .. Waxaan sheeganayaa oo tipsa iyo powerplanet midkoodna mas'uul kama aha waan lumiyay € 200 oo ay ugu mahadcelinayaan diyaaradda …… Sida ay iyagu taleefanka uga jawaabi waayaan , waxaa jira laakiin waxaa jira duubitaan joogto ah, emayllada, markay doonayaan way kaaga jawaabayaan, markay iyagu rabin…. Maya. Haddii aad nasiib leedahay oo ay kugu soo dhacdo, wey fiicantahay haddii ay wax qaldamaan .. Mana iibsan doono, tuugo mid iyo tan kaleba.
Jawaab Maria Victoria
Ku hel Cube iWork12 wax ka yar 180 euro oo hel kumbuyuutar bilaash ah!